ဆိုးရှားအနနေဲ့ စဉျးစားရမယျ့မေးခှနျးကတော့ “မာရှယျရဲ့ စုတျပွတျသတျနတေဲ့ခွစှေမျးကို ဘယျလောကျအထိသညျးခံမလဲ…? “ – Premier League Special
ဆိုးရှားအနနေဲ့ စဉျးစားရမယျ့မေးခှနျးကတော့ “မာရှယျရဲ့ စုတျပွတျသတျနတေဲ့ခွစှေမျးကို ဘယျလောကျအထိသညျးခံမလဲ…? “
January 28, 2021 yeminn Article 0
အသငျးရှုံးနိမျ့နခြေိနျမှာ သှငျးဂိုတဈဂိုးရယူနိုငျဖို့အရေးကွီးနတေဲ့အခြိနျမှာ မာရှယျဟာ ကှငျးထဲမှာလမျးလြှောကျနခေဲ့တာကို ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေ ဒေါသထှကျနပေါတယျ။ ပှဲခြိနျ (၈၈)မိနဈမှာ ဗနျဒီဘိချ၊ကာဗာနီတိုအပွေးအလှားတိုကျစဈဆငျပွီး ဂိုးသှငျးဖို့ကွိုးစားနခြေိနျမှာ မာရှယျဟာ ရှကျဖီးကှငျးရဲ့ ဂိုးဧရိယာအစပျမှာ အသငျးရဲ့ကစားကှကျထဲမပါဝငျဘဲ လမျးလြှောကျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မာရှယျကတော့ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ဒီရာသီမှာ မကျလောကျစရာ ခွစှေမျးမြိုးကို ပွသထားနိုငျခွငျးမရှိသေးတဲ့ အပွငျ သူ့ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျး ရသငျ့တဲ့သှငျးဂိုးတှမေရရှိခဲ့တာတှဟောလညျး ယူနိုကျတကျအသငျး ရှုံးနိမျ့မှုတှရေဲ့ အကွောငျးအရာတှထေဲကတဈခုဖွဈနပေါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူး မာရှယျကို ရှကျဖီးယူနိုကျတကျ နဲ့ ပှဲစဉျက သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကွေားမှာ ဝဖေနျမှု မွငျ့တကျလာခဲ့ပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရှကျဖီးအသငျး နဲ့ ပှဲစဉျမှာပှဲထှကျပါဝငျခှငျ့ရတဲ့အပွငျ ပှဲခြိနျပွညျ့ ပါဝငျကစားခဲ့ရပမေယျ့လညျး တိုကျစဈမှာလူပို တဈယောကျလိုသာဖွဈနခေဲ့ပွီး ဘာမှ လောကျလောကျလားလား လုပျမပွနိုငျခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အားကွိုးမာနျတကျမရှိတဲ့ကစားဟနျကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေ ကွိတျမနိုငျခဲမကြေ ဖွဈနကွေပွီး မာရှယျကိုပှဲထှကျကစားခှငျ့ပေးနတေဲ့ နညျးပွဆိုးလျရှားကိုလညျး ဝဖေနျနကွေပါတယျ။
ဆိုးလျရှား အနနေဲ့ မာရှယျကို ရာသီအစမှာကတညျးက ပထမဦးစားပေး ကစားသမားအဖွဈ ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ အခှငျ့အရေးတှပေေးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ခွစှေမျးအပျေါအားမရဖွဈခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ဝဖေနျမှုတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးခဲ့ပါတယျ။ အသငျးဖျောတှဖွေဈတဲ့ ရကျရျှဖို့ဒျ၊ ဂရငျးဝုဒျ ၊ဖရကျဒျ တို့အပွငျ ပုံမှနျ ခွစှေမျးအောကျ အခြိနျအတျောကွာ ရောကျခဲ့ပွီး အသငျးနဲ့အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့ ပေါ့ဘာလညျး ခွစှေမျးပွနျလညျ ကောငျးမှနျလာခြိနျမှာတောငျ မာရှယျရဲ့ ခွစှေမျးကတော့ တိုးတကျလာမှုမရှိခဲ့ဘဲ ဒုံရငျးက ဒုံရငျးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
တောငျပံမှာ ကစားနကြေ ကစားသမားကို တိုကျစဈအထောငျအဖွဈ အသုံးပွုတဲ့ နညျးပွရဲ့အမှားကွောငျ့လို့ ပွောရအောငျလညျး မာရှယျကို တောငျပံကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတှမှောလညျး သူ့အနနေဲ့ ခွစှေမျးပွနိုငျခွငျးမရှိဘဲ ဘောလုံးဖွုနျးတီးနခေဲ့တာသာမြားပါတယျ။
နှရောသီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျပိတျခြိနျမှာ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ အသငျးကိုရောကျရှိလာတဲ့ ကာဗာနီဟာ အသကျအရှယျအရလညျး သူ့ထကျ ပိုကွီးပမေယျ့ ပှဲစဉျတိုငျးမှာ အားကွိုးမာနျတကျနဲ့ မခိုမကပျ ကစားနခြေိနျ မာရှယျရဲ့ စိတျမပါ တပါ ကစားဟနျတှကေ နညျးပွ ဆိုးလျရှားရဲ့ ယုံကွညျမှုကို အလှဲသုံးစားလုပျနသေလို ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မာရှယျ ကစားခှငျ့ရထားတဲ့ ပှဲခြိနျတှရေဲ့ လေးပုံ တဈပုံလောကျသာ ကစားခှငျ့ရထားတဲ့ ကာဗာနီအနနေဲ့ မာရှယျထကျ ဂိုးပိုသှငျးထားတာကလညျး မာရှယျရဲ့ခွစှေမျးနိမျ့ကမြှုကို မီးမောငျးထိုးပေးနသေလိုဖွဈလို့နပေါတယျ။
ရာသီကုနျအထိသာ ဒီခွစှေမျးအတိုငျးဆကျသှားနမေယျဆိုရငျတော့ယူနိုကျတကျမှာ မာရှယျရဲ့ အနာဂါတျဟာ ပြောကျကှယျသှားတော့မယျဆိုတာ အသခြောပါပဲ။
မာရှယျ ကစားတတျမယျနရောကို နညျးစနဈပိုငျးအရ လိုကျလံရှာဖှနေတေဲ့ ဆိုးရှားအနနေဲ့ဒီအခြိနျမှာ စဉျးစားရမယျ့မေးခှနျးကတော့ မာရှယျရဲ့ စုတျပွတျသတျနတေဲ့ခွစှေမျးကို ဘယျလောကျအထိသညျးခံပွီး ဆကျလကျပှဲထုတျမလဲဆိုတာပါပဲ….
ဆိုးရှားအနေနဲ့ စဉ်းစားရမယ့်မေးခွန်းကတော့ “မာရှယ်ရဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ခြေစွမ်းကို ဘယ်လောက်အထိသည်းခံမလဲ…? ”
အသင်းရှုံးနိမ့်နေချိန်မှာ သွင်းဂိုတစ်ဂိုးရယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ မာရှယ်ဟာ ကွင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တာကို ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက ဒေါသထွက်နေပါတယ်။ ပွဲချိန် (၈၈)မိနစ်မှာ ဗန်ဒီဘိခ်၊ကာဗာနီတိုအပြေးအလွှားတိုက်စစ်ဆင်ပြီး ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ မာရှယ်ဟာ ရှက်ဖီးကွင်းရဲ့ ဂိုးဧရိယာအစပ်မှာ အသင်းရဲ့ကစားကွက်ထဲမပါဝင်ဘဲ လမ်းလျှောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မာရှယ်ကတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ဒီရာသီမှာ မက်လောက်စရာ ခြေစွမ်းမျိုးကို ပြသထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ အပြင် သူ့ကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်း ရသင့်တဲ့သွင်းဂိုးတွေမရရှိခဲ့တာတွေဟာလည်း ယူနိုက်တက်အသင်း ရှုံးနိမ့်မှုတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး မာရှယ်ကို ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲစဉ်က သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ဝေဖန်မှု မြင့်တက်လာခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှက်ဖီးအသင်း နဲ့ ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အပြင် ပွဲချိန်ပြည့် ပါဝင်ကစားခဲ့ရပေမယ့်လည်း တိုက်စစ်မှာလူပို တစ်ယောက်လိုသာဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဘာမှ လောက်လောက်လားလား လုပ်မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အားကြိုးမာန်တက်မရှိတဲ့ကစားဟန်ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက ကြိတ်မနိုင်ခဲမကျေ ဖြစ်နေကြပြီး မာရှယ်ကိုပွဲထွက်ကစားခွင့်ပေးနေတဲ့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားကိုလည်း ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့ မာရှယ်ကို ရာသီအစမှာကတည်းက ပထမဦးစားပေး ကစားသမားအဖြစ် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ်အားမရဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အသင်းဖော်တွေဖြစ်တဲ့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်၊ ဂရင်းဝုဒ် ၊ဖရက်ဒ် တို့အပြင် ပုံမှန် ခြေစွမ်းအောက် အချိန်အတော်ကြာ ရောက်ခဲ့ပြီး အသင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ပေါ့ဘာလည်း ခြေစွမ်းပြန်လည် ကောင်းမွန်လာချိန်မှာတောင် မာရှယ်ရဲ့ ခြေစွမ်းကတော့ တိုးတက်လာမှုမရှိခဲ့ဘဲ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပံမှာ ကစားနေကျ ကစားသမားကို တိုက်စစ်အထောင်အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ နည်းပြရဲ့အမှားကြောင့်လို့ ပြောရအောင်လည်း မာရှယ်ကို တောင်ပံကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာလည်း သူ့အနေနဲ့ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဘောလုံးဖြုန်းတီးနေခဲ့တာသာများပါတယ်။
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ကာဗာနီဟာ အသက်အရွယ်အရလည်း သူ့ထက် ပိုကြီးပေမယ့် ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ မခိုမကပ် ကစားနေချိန် မာရှယ်ရဲ့ စိတ်မပါ တပါ ကစားဟန်တွေက နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေသလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မာရှယ် ကစားခွင့်ရထားတဲ့ ပွဲချိန်တွေရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံလောက်သာ ကစားခွင့်ရထားတဲ့ ကာဗာနီအနေနဲ့ မာရှယ်ထက် ဂိုးပိုသွင်းထားတာကလည်း မာရှယ်ရဲ့ခြေစွမ်းနိမ့်ကျမှုကို မီးမောင်းထိုးပေးနေသလိုဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ရာသီကုန်အထိသာ ဒီခြေစွမ်းအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ယူနိုက်တက်မှာ မာရှယ်ရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲ။ မာရှယ် ကစားတတ်မယ်နေရာကို နည်းစနစ်ပိုင်းအရ လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့ ဆိုးရှားအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာ စဉ်းစားရမယ့်မေးခွန်းကတော့ မာရှယ်ရဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ခြေစွမ်းကို ဘယ်လောက်အထိသည်းခံပြီး ဆက်လက်ပွဲထုတ်မလဲဆိုတာပါပဲ….
ဝုဗျနဲ့သရပှေဲမှာ ဒီရာသီဘောလုံးပေးပို့မှု စံခြိနျတငျခဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီး
ရှကျဖီးယူနိုကျတကျရဲ့ အနိုငျဂိုးသှငျးယူမှုမှာ ဆိုးရှားတဲ့ ခံစဈကစားပုံကို ပွသခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ